Ukhuphiswano lokubhala ngeelwimi ezinintsi eRhodes – Activate Online
Home / isiXhosa / Ukhuphiswano lokubhala ngeelwimi ezinintsi eRhodes
SebBurger 24/08/2014	isiXhosa Leave a comment 4,336 Views
By Philasande Mfaba
Ukhuphiswano lokubhala oluqhuba unyaka nonyaka eRhodes Univesithi luthe lwaveza utshintsho oluthile kulo nyaka. Abo abake beva okanye bathabatha inxaxheba kulo mnyadala bayokukhumbula ukuba kwiminyaka edlulileyo olu khuphiswano belusaziwa ngokuba yi- ‘RhodesUniversity Multilingual Short Story Competition’ (ukhuphiswano lwaseRhodes Univesithi lamabali amafutshane ngeelwimi ezinintsi). Loo nto ichaza ukuba abangeneli bebelindeleke ukuba babhale amabali amafutshane ngeelwimi ezimbini nangaphezulu zaseburhulumenteni.
Kulo nyaka iziphathimandla zolu khuphiswano zivuyela ukwazisa abangeneli ukuba kongezwe amabala ongabhala phantsi kwawo. Kulo nyaka ubani angakwazi ukungenela olu khuphiswano ngemibongo, amaculo, amabali amafutshane nayo yonke indlela yokubhala ongayicinga. Loo nto ingathi yandise inani labo bangenela olu khuphiswano, kuba lowo ungathandiyo ukubhala amabali amafutshane angathathisa aveze inimba yakhe ngezinye zeendlela ezikhankanywe ngasentla. Abo bebelindele ukuba olu khuphiswano luqhube ngenyanga kaTshaziimpuzi (April) nje ngesiqhelo, bade bangaboni kwanto mabancede bangawi nomcinga kuba kulo unyaka ukhuphiswano ludediselwe le nyanga sikuyo.
uZakeera Docrat okwinqanaba leBA honours kwiilwimi zesiNtu uqhuba athi olu khuphiswano luquka wonke umfundi waseRhodes ukuyoma nakwabo abangazenziyo izifundo ezimalunga nolwimi. Uthi isihloko salo nyaka sinika abafundi ithuba lokuba baphande nzulu ngamaqhawe ephondo leMpuma Koloni njengoko eli Phondo ilikhaya lomntu wonke ofunda kule yunivesithi.
Kodwa ke kubalulekile ukuba umgeneli angayilahli imigaqo nemiqathango ebekiweyo ebophelela umbhali ukuba loo nto aza nayo abe uyibhalile, kwaye eyibhale ngeelwimi ezimbini nangaphezulu zeseburhulumenteni , ubude boko akubhalileyo bungeqi amagama aliwaka (1000), kwaye umsebenzi wakhe ulandele kwisihloko esibekiweyo eisthi: “Eastern Cape Heroes: Past and present” (amaqhawe aseMpuma Koloni: mandulo nanamhla).
Uze emva koko uxhulumane nalowo uzingise olu khuphiswano uSam Naidu, ngokuthi u;imeyile loo nto uthe wayibhala kwi-dilesi ethi n.naidu@ru.ac.za. Phambi komhla we-31 kuAgasti 2014. Ude uncede ungalibali ukuhambela umnyadala ozobe ubanjelwe ebarrect red ngomhla wamashumi amabini kweyoMsintsi (24 September 2014) apho kuyokukhankanywa lowo uphumelele isanxa semali engaka ngeeponti ezingamakhulu amahlanu.
NgokukaZakeera Docrat, lo mcimbi awumiselwanga bafundi baseRhodes kuphela ngoko umema uluntu luphela ukuba lizimasele eli theko kubhiyozelwe ukusetyenziswa kweelwimi enintsi. Lo kaDocrat uqhuba athi, eli lithuba lokuba abafundi, abahlohli, abasebenzi baseRhodes kunye nabahlali jikelele basikelane ngamava ngalo mba uhanjelweyo, de lowo uphumeleleyo angene eqongeni akhwaze amaqhinga athe amphumelelisa. Iliso lakho lingohlukani neActivate kuba kwixa elizayo sizonaba ngalo mnyadala ozobe uqhuba ngee-24 kweyoMsintsi 2014.
Wena uthini? (izimvo zabafundi)
Ndiyakuxhasa ukusetyenziswa kweelwimi ezinintsi, umama wam wandiqeqesha ndiselula ukuba ndisebenzise iilwimi ezinintsi, ndithe ndineminyaka nje emithandathu ndabe isiPutukezi, isiTswana, isiSwati kunye nesiNgesi ndizikhupha ngeempumlo. Into yokuthetha iilwimi ezinintsi yenza kube lula ukwakha ubuhlobo kuba ndifikelela lula kwabanye abantu.
Lona ulwazi ngolu khuphiswano lwaseRhodes ndinalo, nangona bendithanda ukulingenela andikwazanga kuba ezi lwimi ndizithethayo azikho burhulumnteni. Xa ndinokufumana ithuba lokubhala ndingabhala imibongo okanye amabali amafutshane.
Angel Bulunga—Beit H…
Ukuthetha iilwimi ezinintsi kwenza uthungelwano lube lula gqitha, kunabisa amasiko, kwaye sesona sixhobo sibalulekileyo kumanqanaba amaninzi.
Ulwazi ngolu khuphiswano ndinalo, qha ke ndibethwe lixesha, ixesha abasinike lona lincinci kakhulu. Ndingathanda ukubhala amabali amafutshane xa ndingafumana ithuba.
Ukuthetha iilwimi ezintsi kunganceda ukuba abafundi baqonde ngcono izifundo zabo, kutsho kunyuke nezinga lemfundo, into edala ukuba abafundi batshone kakhulu yinto yokuba bafundiswa ngesiNgesi kakhulu.
Ulwazi ngolu khuphiswano bendingenalo, ukuba bendazile bendiyokubhala amabali amafutshane.
Phumza Tilana—Phelps H…
Yinto entle kakhulu usebenzisa iilwimi eziliqela, kwenza ukuba ukuthetha kwande kwaye kube lula.
Ulwazi lulo khuphiswano lwaseRhodes lokubhala ngeelwimi ezinintsi bendingenalo, xa ndingake ndibhale ndiyokubhala imibongo.
Violet Selwane—Atherstone H…
Ilizwe lethu uMzantsi Afrika liyazingca ngokuba lelona lizwe lineelwimi ezinintsi kumhlaba wonke jikelele. Kuluxanduva lwethu thina bemi beli lizwe ukuziququzelela ezi lwimi, sizokwazi ukugcina umgangatho wazo uxhomile ngokuthi sizisebenzise. Sibambe ngazo zombini kwikomiti yeelwimi yaseRhodes Univesithi ngokuthi isinike ithuba lokuba siveze ubuchule nobuciko malunga nokuthetha kunye nokubhala ngeelwimi ezinintsi, umfundi ngamnye uyacetysiwa ekwakhuthazwa ukuba angenele olu khuphiswano, engajonganga kuzuza mali kuphela, ekwaphuhlisa neelwimi zelizwekazi uMzantsi Afrika. Ncedani bafundi, mayingene imibhalo phambi kwemini yangee 31 kuAgasti 2014. Kwazi bani, umqa ungawela kuwe esandleni, kwaye Usind’ ezma akanatyala.
Previous The laws of HIV/AIDS
Next Are dining halls enviro-friendly?